वुहानमा कोरोना भाइरस अमेरिकी सेनाले ल्याएको हुनसक्छ– चिनियाँ प्रवक्ता - Dainik Online Dainik Online
वुहानमा कोरोना भाइरस अमेरिकी सेनाले ल्याएको हुनसक्छ– चिनियाँ प्रवक्ता
प्रकाशित मिति : ३० फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ७ : ५१
काठमाडौं । चीनको विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले बिहीबार अमेरिकी सेनाले चीनको वुहानमा कोरोना भाइरस ल्याएको हुनसक्ने बताउनुभएको छ।
बेइजिङबाट ग्याब्रियल क्रसलेले रोयटर्सका लागि लेखेको समाचारमा जनाइएअनुसार ती प्रवक्ताले वासिङटनसँग भाइरसलाई लिएर कडा शब्द प्रयोग गरी ट्वीट गर्नुभएको हो।
केही दिनयता अमेरिकी अधिकारीहरुले चीनको वुहानमा सुरु भएको भाइरस फैलिन नदिन चीनले सुरुवाती चरणमै आवश्यक कदम नचालेकोले विश्व नै संक्रमित भएको आरोप लगाउँदै आएका थिए। बुधबार मात्रै अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार रोबर्ट ओब्राइनले चीनले सुरुमै प्रभावकारी कदम नचाल्दा विश्वभर फैलिएको आरोप लगाएका थिए।
यहीँ बीचमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानको प्रमाणित ट्विटर एकाउन्टमा अंग्रेजीमा गरिएको ट्विटमा अमेरिकाले पारदर्शिता नदेखाएको आरोप लगाइएको छ।
‘अमेरिका बिरामी शून्य अवस्थामा कहिलेदेखि थियो? कति संक्रमित छन्, ती अस्पतालका नामहरु के हुन्? सम्भवतः तिनै अमेरिकी सेना हुनसक्छन्, जसले वुहानमा कोरोनाभाइरस ल्याए।’, झाओले भन्नुभएको छ, ‘पारदर्शी होऊ, तथ्यहरु सार्वजनिक गर, हामीलाई विस्तृत जानकारी चाहियो।’
झाओलाई आक्रामक ट्विटर प्रयोगकर्ता मानिन्छ। तर उहाँले ट्विटरमा भाइरस फैलाएको अमेरिकी सेनालाई आरोप लगाए पनि यसको प्रमाण भने दिनुभएको छैन। बिहीबार झाओकै समकक्षी विदेश मन्त्रालयका अर्का प्रवक्ता गेंग शुआंगले अमेरिकी अधिकारीहरुको आलोचना गर्दै अनैतिक र अनुत्तरदायी भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। अमेरिकी अधिकारीले बेइजिङको भाइरसविरुद्धको कदम प्रभावकारी नहुँदा विश्वमा महामारी सृजना भएको आरोप लगाएपछि गेंगले आलोचना गर्नुभएको हो।
ओब्राइनको प्रतिक्रियालाई लिएर बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा गेंगले यस्ता धारणाले कुनै सहयोग नगर्ने टिप्पणी गर्नुभएको थियो।
त्यस्तै, प्रवक्ता झाओले क्यानडाको ग्लोबल रिर्सच नामको वेवसाइटका दुई लिंक शेयर गर्दै आफ्ना फलोअर्सलाई उक्त ट्वीट रिट्वीट गर्न पनि अनुरोध गर्नुभएको छ।
लिङ्क शेयर गर्दै उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘यो आश्चर्यमा पार्ने खालको छ। यसले मैले पहिला विश्वास गर्ने धेरै कुरा परिवर्तन गरिदिएको छ।’
उक्त वेवसाइटले गत अक्टुबरमा वुहानमा भएको मिलिटरी वर्ल्ड गेम्समा सहभागी अमेरिकी सैनिकमा कोरोना भाइरस भएको लेखेको छ। उक्त प्रतियोगितामा १ सय देशका सैनिक सहभागी थिए।
कोरोना भाइरस संक्रमण २०१९ को डिसेम्बरमा पहिलोपटक चीनको वुहानमा देखिएको थियो। त्यसलगत्तै हुबेई प्रान्तमा फैलिएको थियो। जहाँ विश्वका संक्रमणको दुई तिहाइ भेटिएको थियो। तर केही सातायता भने चीनबाहिर भाइरस संक्रमण तीव्ररुपमा फैलिएको छ। चीनले भाइरस रोक्न हुबेई पूरै बन्द गरेको थियो भने वुहानमा समेत ठप्प पारिएको थियो।
चीनमा संक्रमितको संख्या निकै घटेर लगभग शून्यको अवस्थामा झरेको छ भने संक्रमितहरू धेरै निको भएर घर फर्केका छन्। बुधबार वुहान पुगेर राष्ट्रपति सी जिनपिङले कोरोना भाइरस संक्रमण चीनमा समाप्त भएको घोषणा गरिसक्नुभएको छ।